नर्सिङ – Page4– Health Post Nepal
नर्सको पारिश्रमिक मासिक जम्मा ५ हजार, श्रमशोषण रोक्न नर्सिङ संघको पहल
नेपाल नर्सिङ संघमा १३ हजारको हाराहारीमा नर्स आबद्ध छन् । देशका अधिकांश स्वास्थ्यसंस्थाले ज्यादै न्यून पारिश्रमिकमा र कतिपयले त भोलेन्टेयरका रूपमा नर्सलाई काममा लागाइरहेका छन् । ठूलो धनराशि, समय र मिहिनेत खर्चिएर प्राविधिक जनशक्तिका रूपमा आफूलाई विकास गराएका नर्सले...
नेपालगन्ज नर्सिङ क्याम्पसबाट नर्सिङ अध्ययन सकेपश्चात् मैले केही समय कैलालीको टीकापुर अस्पतालको प्रसूति वार्डमै काम गरेँ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको प्रसूति वार्डमा काम थालेको भने साढे दुई वर्ष भएको छ । पहिलोपटकको आवेदनमै नाम निकाल्न सफल भएँ । नर्सिङ...
नर्सलाई ‘बेसिक लाइफ सपोर्ट’ तालिम
नर्सहरुका लागि जोखिममा परेकाहरुको तत्काल जीवन रक्षाका लागि अत्यवश्यकीय सीपसम्बन्धी तालिम आयोजना गरिएको छ । नेपाल नर्सिङ संघ र इनलाइट स्किलको संयुक्त आयोजनामा दुई दिने बेसिक लाइफ सपोट (बिएलसी) र साइकोलोजिकल फस्ट एड तालिम सम्पन्न भएको हो ।...
नर्सको सेवाबाट सन्तुष्ट हुनेको संख्या धेरै छ । तर, कतिपयको सोचाइ नर्सहरू संवेदनशील हुँदैनन् भन्ने पनि छ, जुन सत्य होइन । यदि अस्पतालमा कुनै बिरामीको मृत्यु भएमा त्यो घटनाले नर्सलाई घर पुगिसकेपछि पनि सुत्न दिँदैन । युवा तथा बालक...
नर्सिङ पढ्न सुरु गर्दा मलाई यो पेसा र यसको क्षेत्राधिकारबारे खासै ज्ञान थिएन । विद्यालयकी सिनियर दिदीले पढेको देखेर मलाई पनि नर्सिङ पढ्ने इच्छा जाग्यो । मेरा बुबा मेडिकल क्षेत्रमै आबद्ध भएका कारण उहाँबाट पनि नर्सिङ पढ्ने प्रेरणा प्राप्त...
म सुनसरी जिल्लाको इटहरीमा जन्मे–हुर्केको मान्छे । मेरो परिवारमा कोही पनि नर्स थिएन, तर फुपूका दुई छोरी भने नर्स हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले लगाएको नर्सको ड्रेस देखेर मेरो मनै लोभिन्थ्यो । नर्स बनेमा परिवारमै पनि कोही बिरामी परेमा आफैँले हेरचाह...
नर्सिङ पेसा कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो ? नर्सिङको कुरा गर्दा मैले वि.सं. २०३८ मा अध्ययन सुरु गरेँ । ०४१ मा अध्ययन पूरा गरेलगत्तै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्टाफनर्सका रूपमा काम सुरु गरेँ । अनमी खारेज भएर स्टाफनर्सको अध्ययन सुरु हुनेक्रममा विराटनगरबाट...
म ७ वर्षदेखि मानसिकरोग अस्पताल पाटनमा कार्यरत छु । अन्य अस्पतालमा भन्दा मानसिकरोग अस्पतालमा काम गर्न गाह्रो छ । यहाँको वातावरण अन्यत्रको भन्दा नितान्त फरक छ । करिब १३ वर्ष प्रसूतिगृहमा समेत काम गरिसकेकाले मैले मानसिक र अन्य अस्पताल...
मेरो जन्म मनाङको जानकीमा भएको हो । मनाङबाटै एसएलसीसम्मको अध्ययन पूरा गरेपश्चात् उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आएँ । मनाङ विकट तथा पिछडिएको जिल्ला भएकाले स्कुल तहको अध्ययनपछि त्यहाँका प्रायः युवा विदेश जाने गर्छन् । तसर्थ, मनाङमा उच्च शिक्षा आर्जन...
वि.सं. २०३८ को एसएलसी परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको रहेछ । म लुगा धोइरहेका वेला केही साथीहरूले एसएलसीको नतिजा आएको र म दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको बताएपछि खुसीले गद्गद् भएँ । त्यतिवेला मेरो घर काठमाडौंको लगनमा थियो । ४ दाजुभाइ,...
म लमजुङको गाउँमा जन्मेको मान्छे, तर पढाइका लागि बन्दीपुर बस्थेँ । मेलै एसएलसीसम्मको पढाइ गाउँकै स्कुलबाट पूरा गरेँ । त्यसवेला नर्सिङ पेसामा आबद्ध दिदीहरूको कामप्रतिको समर्पण र सक्रियताले मलाई नर्सिङ पढ्न प्रेरणा प्रदान ग¥यो । मेरो परिवारमा ३ दिदीबहिनी...
म ताप्लेजुङको दुर्गम क्षेत्रमा जन्मिएको मान्छे, सानो छँदा काठमाडौंबाट नर्सहरू गाउँ आएर विभिन्न स्वास्थ्य शिविरमा असहाय तथा बिरामीको सेवा गरेको देख्दा मलाई पनि भविष्यमा उनीहरूले जस्तै दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने इच्छा जाग्यो । त्यसैबाट मलाई नर्स पढ्न प्रेरणा मिल्यो...
म दुर्गम जिल्ला जुम्लामा जन्मेकी हुँ । त्यहाँको अस्पतालमा पहिले डाक्टर, नर्स कत्ति पनि नहुने । मेरा अभिभावक शिक्षित हुनुहुन्थ्यो । हामी उपचारका लागि हवाईजहाजबाट सुर्खेत हुँदै नेपालगन्ज जानुपथ्र्यो । सडक यातायातको सुविधा नभएको हाम्रो ठाउँमा डाक्टर, नर्सको सधैँ...
मेरा बुबा म सानो छँदैदेखि बिरामी हुनुहुन्थ्यो र अस्पताल गइरहनुपर्ने । त्यहाँ नर्सहरूले बाबालाई सेवा गरेको देखेँ, उहाँहरूको लगनशीलता र प्रतिबद्धता देखेर मलाई नर्स बनेर बिरामीको सेवा गर्ने इच्छा पलायो । बच्चैमा देखेको सपना, आज व्यवहारमा प्रयोग गर्न पाउँदा...